भाडा आय प्राप्त गर्न बीमा | अर्थव्यवस्था वित्त
भाडा आय प्राप्त गर्न बीमा
यस समयमा, परम्परागत लगानीको वैकल्पिक घर खरीद पछि प्रतिनिधित्व गर्दछ यसलाई पछि भाडामा लिनको लागि। र यस तरिकाले, प्रत्येक महिना एक आय प्राप्त गर्नुहोस् जुन बैंकि products उत्पादनहरूको अपेक्षाहरू (समय निक्षेप, प्रोमिसरी नोट, बन्डहरू, आदि) र लगानीको लागि अभिप्रेरित भन्दा बढि हो। जहाँ तपाईंलाई गम्भीर कठिनाइहरू हुनेछ %% स्तरहरू पार गर्नुहोस् पैसाको मूल्य र वित्तीय बजार को विकास को एक वर्तमान परिणाम को रूप मा। एक कारक जसले उनीहरूको आँखा फर्काउनको लागि राम्रो संख्यामा लगानीकर्ताहरूको नेतृत्व गर्दैछ ladrilloयद्यपि यस मामलामा घर जग्गाको भाँडाबाट।
यस समयमा, तिनीहरूले विशेष प्रासंगिकता को अन्य वित्तीय सम्पत्ति भन्दा एक उच्च फिर्ताको प्रस्ताव। किनकि वास्तवमा पैसा तपाई घरको भाडामा लिन सक्नुहुनेछ २०१ 7,8 को पहिलो आधा अवधिमा 2018. XNUMX.% पुगेको छ, आदर्श अचल सम्पत्ति पोर्टल द्वारा हालसालै गरिएको अध्ययन अनुसार। जसमा यो देखाइएको छ कि घरहरुमा लगानीले उनीहरुलाई भाँडामा राख्नको लागि प्रस्ताव गरिएको मुनाफा year.7,8% मा बढेको छ जुन एक बर्ष पहिले .7,1.१% बाट भाडाको मागले अनुभव गरेको सुदृढीकरणका कारण भएको छ।
यो एक उत्कृष्ट विचार हुनसक्दछ जसले गर्दा तपाईले आफ्नो बचत अहिलेको भन्दा बढी लाभदायक बनाउन सक्नुहुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले प्रस्तुत गरेको वर्तमान परिस्थितिमा निर्भर गर्दै। जहाँ, यो समान अध्ययनले पुष्टि गर्दछ कि स्पेनमा सम्पत्ति लगानीले विश्लेषण गरिएको कुनै पनि उत्पादनहरूमा, फिर्ताको दरहरू तिर्ने गर्दछ जुन सबैभन्दा खराब अवस्थामा १० वर्षको सरकारी बन्धन हो। तपाइँलाई प्रयास गर्न को लागी एक आमन्त्रित तपाईंको जाँच खाता ब्यालेन्स सुधार गर्नुहोस् लगानीको यो अनौंठो प्रकारको माध्यमबाट जुन यसको सुरक्षा द्वारा सबै माथि वर्णन गरिएको छ।
1 भाडा बीमा: यसको उपयोगिता
2 यी उत्पादनहरू कसरी छन्?
3 कानूनी रक्षा को एक तत्व को रूप मा
4 भाडा बीमा का लाभहरु
5 तपाईं यो नीति संग के पाउनुहुन्छ?
भाडा बीमा: यसको उपयोगिता
यो अधिक वैकल्पिक लगानीको मुख्य समस्या भनेको भाडावालहरूले भाडा तिर्दैन। अचम्म मान्नुपर्दैन, यसले अपराधको स्तर प्रस्तुत गर्दछ जुन एकदम चिन्ताजनक छ र यसले तपाईंलाई मालिकहरू वा लगानीकर्ताहरूले चाहिने थोरै चाहिने यी परिदृश्यहरूबाट बच्न एक भन्दा बढी सावधानी अपनाउन प्रोत्साहित गर्दछ। एउटा तरिका जुनaअधिक सुरक्षा यो एक घर भाडाको लागि बनाईएको बीमा मार्फत गरिन्छ। यो महिनाको अन्त्यमा अधिभोग शुल्क भुक्तान नगरेको यस अप्रिय परिस्थितिमा जानेबाट जोगिन यो सही समाधान हुन सक्छ।
तर यसले केवल अर्को पक्षको लागि निवारक उपायको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन, यसले घरको पेशाको भाडा तिर्ने तपाईंको दायित्व पूरा गर्दछ। यदि होईन भने यसको विपरितमा, यसले सम्पूर्ण रणनीति गठन गर्दछ, अवश्य पनि धेरै प्रभावकारी, लाई एक छ सम्भावित द्वन्द्वको बिरूद्ध कानूनी प्रतिरक्षा भाँडादारसँग। अचम्मको कुरा होइन, यो यस प्रकारको लगानीको लागि एक समाधान हुनेछ, आफ्नो जीवनको कुनै खास समयमा एक भन्दा बढी समस्यामा विश्वास नगर्नुहोस्। जस्तो कि अन्य व्यक्तिलाई भइरहेको छ जसले बचतको मुनाफा सुधार गर्नका लागि एक सूत्रको रूपमा भाँडाको विकल्प लिने निर्णय गरेका छन्।
यी उत्पादनहरू कसरी छन्?
भाडा बीमा मूल रूपमा विशेषता गरिएको छ किनकि यसले तपाईंलाई तपाईंको घरको भाडाको भुक्तानी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। विशेष गरी अवश्य गाह्रो परिस्थितिहरूमा जहाँ धेरै जसो परिस्थितिहरूको लागि तपाईले नयाँ भाँडाबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। यस अचल सम्पत्ती सम्पत्तिको उपयोगको लागि भुक्तान गर्न तपाईंले केहि अन्य कानुनी उपाय पनि लिन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा। यस परिदृश्यमा, भाडा बिमा कोर्सको कुनै गम्भीर घटनाको घटनामा भाँडाको भुक्तानीको ग्यारेन्टी गर्नेछ अर्को पक्ष द्वारा सम्झौताको भुक्तानमा। एक धेरै साधारण कारणको लागि व्याख्या गर्नु र त्यो यो हो कि यो बीमा कम्पनी आफैंमा हुनेछ जसले यी भुक्तानीहरूलाई एक प्रभावकारी तरिकामा प्रतिक्रिया गर्दछ र तपाईंको वास्तविक आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
तर यी बीमाहरूले मात्र यो कार्य पूरा गर्छन् किनकि तिनीहरू यस व्यक्तिगत सम्पत्तीको राज्यको सुरक्षाको लागि जिम्मेवार हुनेछन्। सम्भव क्षति भन्दा पहिले त्यो उनीहरूको बसीमा हुन सक्छ। केहि निश्चित फ्रिक्वेन्सीको साथ सामान्यतया यी सुविधाहरूको अपार्टमेंटको साथ हुन्छ र प्रत्येक वर्ष एक प्रीमियमको भुक्तानीको साथ तपाईं अबबाट बच्न सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ, तपाईं बिर्सनुहुन्न कि केहि नीतिहरूले फर्निचरको संरक्षणलाई पनि ध्यानमा राख्दछन् र सबै भन्दा खास अवस्थाहरूमा पनि तपाईंको सम्पत्तीको सबैभन्दा मूल्यवान वस्तुहरू।
कानूनी रक्षा को एक तत्व को रूप मा
अर्को धेरै फरक दृष्टिकोणबाट, यस प्रकारको विशेष बीमाले तपाईंलाई कुनै पनि अभियोग विरुद्ध सबै रक्षा संयन्त्रहरू प्रदान गर्न सक्छ जुन तपाइँ प्रक्रियाको अन्य भागको बिरूद्ध लिन सक्नुहुनेछ, त्यो हो, नयाँ भाँडामा पर्नेको बिरूद्ध। जे भए पनि यो सत्य हो कि यस बीमा उत्पादनले असीमित भुक्तानीहरूको ग्यारेन्टी गर्दैन। यदि होईन भने, यसको विपरीत, त्यहाँ पुग्ने अधिकतम सीमा छ लगभग १ or वा १ months महिनामा पुग्नुहोस्, र कुन कुन उत्पादनमा तपाईंले सम्झौता गर्नुभयो त्यसमा निर्भर गर्दै। अर्को पक्ष जुन धेरै सान्दर्भिक हुन्छ त्यो त्यो हो जुन यसको लागतसँग सम्बन्धित छ। एक फीसको साथ जुन प्राय: year०० र every०० यूरो बीचमा प्रति वर्ष प्रतिनिधित्व गर्दछ।
अर्कोतर्फ, यी विशेषताहरूको बीमा द्वारा विशेषता छ तपाईंले सचेत हुनुपर्दैन कि भाँडादारले तपाईंलाई प्रत्येक महिना भुक्तानी गर्दछ। बरु, यो कार्य हो जुन बीमा कम्पनीबाट नै केन्द्रीकृत हुनेछ। अन्तमा, तीनिहरु निश्चित गर्नेछन् कि तपाईलाई owedण पाएको पैसा तपाईको बचत खातामा जान्छ। ती कुनै समस्या छैनन्। जसको साथ, तपाइँ आफैले प्रक्रियाको कुनै पनि भाग व्यवस्थापन गर्नुपर्दैन। यसको साथ तपाईंको रूचिहरूको रक्षा गर्न ठूलो सान्त्वना हुनेछ किनकि तपाईंले कुनै प्रशासनिक प्रक्रिया नगरी भुक्तानहरू छोड्नुहुनेछैन।
भाडा बीमा का लाभहरु
यसमा कुनै श is्का छैन कि यस बीमा उत्पादन सम्झौता गर्दा तपाइँको दैनिक जीवनमा एक भन्दा बढी फाइदा प्रदान गर्दछ यदि तपाइँ एउटा घरको मालिक हुनुहुन्छ र यसलाई भाँडामा लिने निर्णय गर्नुभयो भने। केहि स्पष्ट ईनोव्हेटिभ सेवाहरूको साथ जुन तपाईं सुरुबाट सक्नुहुन्न। किनभने यस नीतिको योगदानले तपाईंलाई मासिक भुक्तानीहरूको भुक्तानीमा सुरक्षा बाहेक केही बढि दिन्छ, किनकि तपाईं अबबाट प्रमाणिकरण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
तपाईं सक्नुहुन्छ भाडा प्रोफाइल रोज्नुहोस् तपाईंको फ्लैट वा अपार्टमेन्ट को लागी। यहाँसम्म कि यो राम्रो दाता हो वा छैन भनेर जाँच्न शक्तिशाली फिल्टरहरूको साथ र यदि यो डिफल्टर्सको सूचीमा समावेश छ कि छैन भनेर पनि जान्न। किनभने अन्तमा तपाईं एक व्यक्ति जसले तपाईं अर्को केही बर्षको लागि यो सम्पत्ती कब्जा गर्न चाहानुहुन्छ भनेर निर्णय गर्ने व्यक्ति हुनेछ।
तपाईं धेरै हुनेछ सम्भावित क्षतिबाट बचाईएको छ त्यो सम्पत्तीमा साथै भाँडादारको कार्यहरूमा पनि हुन सक्छ। यस तरिकाले, तिनीहरूले तपाइँको व्यक्तिगत खाताहरूलाई असर गर्ने छैन तर यी खर्चहरू बीमा कम्पनीले नै मानेको छ।
यस प्रक्रियाको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण अंश यो तपाईंसँग हुनेछ निश्चित आय बीमा प्रत्येक वर्ष, भाँडादारहरूको कार्यको पर्वाह नगरी। जुनसँग तपाईं आउने बर्षहरूमा खर्च र आयको राम्रो योजना बनाउन सक्नुहुनेछ। अन्य वित्तीय उत्पादनहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको भन्दा उच्च नाफाको साथ। र सुरूदेखि नै सुरक्षित र ग्यारेन्टी मार्गमा।
तपाईंसँग ठूलो हुनेछ कुनै पनि अभियोग विरुद्ध संरक्षण अपरेशनको अन्य भागको सम्बन्धमा। यसको प्रकृति जे होस् र बीमा कम्पनीको समर्थनमा। यस कार्यको परिणाम स्वरूप, यसले अतिरिक्त खर्चहरू समावेश गर्दैन जुन तपाईंको जेबलाई असर गर्न सक्दछ।
तपाईं यो नीति संग के पाउनुहुन्छ?
अवश्य पनि, भाँडा बीमा भाँडामा पुर्‍याउँदा तपाईलाई मानसिक शान्ति दिनेछ। धेरै र बिभिन्न प्रकृति स्पष्टीकरणहरू द्वारा जुन हामी तपाईंको अगाडि खुला गर्दछौं।
तपाईंको घर वा अपार्टमेंटको भाडाको अपरेशन सञ्चालन गरिनेछ अधिक पारदर्शिता संग पहिले भन्दा। जहाँ तपाइँ अब तपाइँको नयाँ भाँडादारहरु को सम्भावित कार्यहरु को बारे मा सचेत हुन को लागी यो आवश्यक छैन।
तपाईं स्पष्ट हुनेछ व्यक्तिको सन्दर्भ जो निम्नलिखित महिनाहरु वा वर्षहरु मा घर को कब्जा हुनेछ। तपाईको प्रोफाइललाई तपाईले जहिले पनि थाहा पाउनुहुनेछ: कामको प्रकार, वैवाहिक स्थिति, यदि तपाइँसँग तेस्रो पार्टीहरू भन्दा पहिले partiesण छ भने, आदि।
तपाईंसँग पूर्ण आश्वासन छ जुन तपाईंसँग केही हुनेछ प्रत्येक वर्ष निश्चित आय। भुक्तानीमा सम्भावित घटनाहरू बिना जुन आउँदो केही बर्षहरूमा व्यक्तिगत वा पारिवारिक बजेट अस्थिर बनाउन सक्छ।
एक संग मुनाफा कि तपाईं अधिक परम्परागत वित्तीय सम्पत्ति को माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुन्न। राशि को हिसाबमा एक धेरै महत्त्वपूर्ण फरक संग तपाईं प्रत्येक वर्ष र समयमा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तिनीहरू अत्यधिक महँगो उत्पादनहरू होइनन्, तर तपाईं सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ धेरै किफायती शुल्क बाट सबै प्रकारका घरेलु अर्थतन्त्रहरूको लागि। किनकि दिनको अन्त्यमा, यो एक बीमा मोडल हो जुन तपाईंको व्यक्तिगत चासोहरूको रक्षा गर्न एक भन्दा बढी समाधान प्रदान गर्दछ।
यो नीतिहरूको वर्ग हो जुन भइरहेको छ क्षेत्र मा धेरै कम्पनीहरु द्वारा मार्केटिंग। थप सेवाहरूको श्रृंखलासँग जुन तपाइँलाई तपाईंको घरको लागि समाधानको अर्को श्रृंखला प्रदान गर्दछ।
र अन्तमा, तपाईले यो बिर्सनु हुँदैन कि यो एक धेरै व्यावहारिक बीमा हो जब तपाईं यस सम्पत्तीमा हुने सबै कुराको हुन सक्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » भाडा आय प्राप्त गर्न बीमा
IPREM के हो?